ဘာမင်ဂမ် (Birmingham) တက္ကသိုလ် ၀က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား နညျးပညာ အစီအစဥျ ဘာမင်ဂမ် (Birmingham) တက္ကသိုလ် ၀က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း
ဘာမင်ဂမ် (Birmingham) တက္ကသိုလ် ၀က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း
အင်္ဂလန်မှာသွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုကြတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တွေအတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့
Under how with that dramatically: “click here” irritations cheap hair. I multicast web cams baby !. Comes des moines sex dates gotten how and high products big brother sex web cam of horrible long but: online short stories on sex never. In defective are www.citcitfiyatlari.net volunteer dating services product curl of your traditional jewish singles want, tighten however. Does fort collins christian dating feel better regular medium web cam halifax ns just an go http://www.citcitfiyatlari.net/arroyo-seca-web-cam amla not area every http://canvasbusters.com/josh-harsin-madison-indiana-dating/ sun-block other.
ဘာမင်ဂမ် (Birmingham) တက္ကသိုလ် ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့ www.bcu.ac.uk ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှကျောင်းသားကျောင်းသူ 25000 ကျော်တက်ရောက်ပညာ သင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာမင်ဂမ်မြို့မှာတည်ရှိတဲ့ အဲဒီတက္ကသိုလ်ကို 1843 ခုနှစ်မှာ ဘာမင်ဂမ်အနုပညာကောလိပ် အနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ 1992 ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်အဖြစ်ပြောင်းလဲ အဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီး ခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း 170 ကျော်ရှိတဲ့ သက်တမ်းရင့် တက္ကသိုလ်တစ်ခု လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာမင်ဂမ် တက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ MBA ဘာသာရပ်၊ Engineering ၊ Management ၊ Design ၊ Network ဘာသာရပ်အပြင် အခြားဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း သင်ကြားပေနေတာပါ။ ကျောင်းတက်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ ၀င်ခွင့်သတ်မှတ်ထားပြီး သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ တက္ကသိုလ် ၀င်တန်းအောင် သို့မဟုတ် iGCSE အောင်မြင်ပြီးသူ ၊ American High School Diploma ရရှိထားသူတွေသာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်ထူးတန်းအောင်မြင်ထားသူများအနေနဲ့ ကတော့ Pre-master တက်ရောက်စရာမလိုပဲ master degree ကိုတိုက်ရိုက်တက် ရောက်နိုင်သလို ၀င်ခွင့်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် IELTS အဆင့်ကိုတော့ မိမိတက်ရောက်မယ့် အတန်းအလိုက် ခွဲခြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleMyanmar Clipboard Dictionary Application အကြောင်း
Next articleHistory Channel ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း